Venezuwela - ALinks
Visa kumazwe asimahla eVenezuela
Oktobha 25, 2021 IShubham Sharma Venezuela
Ngokwesalathiso seNqanaba lePaspoti yeSikhokelo, ipasipoti yaseVenezuela ngoku ibekwe kwindawo yama-44. Ivumela ukungena kumazwe angama-128 ngaphandle kokufuna i-visa. Uhambo lwasimahla lweVisa kunye ne-visa-ekufikeni ziyafumaneka kubanini bepaspoti baseVenezuela kumazwe anje ngePhilippines,
Ngaba ufuna umsebenzi eVenezuela? Jonga ukuba uyifumana njani
Novemba 21, 2020 UMaitri Jha imisebenzi, Venezuela
Ngaba ufuna umsebenzi eVenezuela? Okanye ufudukele eVenezuela kutshanje? Singakunceda ngokufumana. Eli lizwe lidume mveliso yepetroleum. Kwakhona, iphakathi kwamazwe ali-17 ahle kakhulu kwihlabathi jikelele. Njengokuba, kunjalo
Abantu baseVenezuela? Jonga indlela yokufaka isicelo sokukhuselwa ngo-Asylum
Aprili 22, 2020 demi ababaleki, Venezuela
Ngokwe-UNHRC, abantu baseVenezuela bayalishiya ilizwe labo. Benza oko ngenxa yokwanda kobundlobongela, ukungakhuseleki kunye nezisongelo. Kwakhona, kujongene nokusilela kokutya, amayeza kunye neenkonzo ezibalulekileyo. Ukusuka kwingxelo yeUNHRC
Fumana uLwazi malunga neVenezuela Visa!
Aprili 22, 2020 UKaruna Chandna Venezuela, ivisa
IVenezuela imi kunxweme olusemantla eMzantsi Melika. Ngabemi abamalunga ne-3.7 crores, Iyaziwa ngeoyile, abafazi abahle, iiStar Falls, kunye nabadlali bebhola. Ukuba uceba ukutyelela iVenezuela. Ngeholide, uphando, intlanganiso yeshishini, kunye
Februwari 4, 2020 UMaitri Jha isifundo, Venezuela
Ukucwangcisa ukufunda eVenezuela kujonge kwiiyunivesithi ezisixhenxe eziphambili eVenezuela. IiYunivesithi eziPhezulu eVenezuela Ngokwe topuniversities.com, kukho iiyunivesithi ezisithoba eVenezuela eziphakathi kwinqanaba leYunivesithi (2018) yiQS Latin America University
Februwari 2, 2020 UMaitri Jha impilo, Venezuela
Inkqubo yezempilo eVenezuela yahlulwe ngokubanzi yangamacandelo amabini angamacandelo oluntu nawabucala. Uluhlu lwesibhedlele esinendawo kunye nenombolo yefowuni zinikezelwe kweli nqaku. Isibhedlele seYunivesithi - Isibhedlele saseMaracaibo uLuis Razetti-Barinas
Iindleko zokuhlala eVenezuela
Februwari 1, 2020 UMaitri Jha imali, Venezuela
Ixabiso lokuphila yinto ebaluleke kakhulu ukuba sithetha ngeVenezuela kunokuba kunjalo, kubiza ixabiso eliphantsi kunexabiso lokuhlala e-USA kodwa, ngokwe-numbeo iindleko zokuhlala eVenezuela yi-11.58% ngaphezulu kune
Inkqubo yothutho yaseVenezuela
Februwari 1, 2020 UMaitri Jha yibakhona, Venezuela
Awuyi kufumana naluphi uloliwe eVenezuela kodwa ewe zininzi iibhasi ukuze uhambe ngokulula phakathi elizweni ngeebhasi, iimoto, kunye neeteksi. Kubalulekile ukuba usoloko uphatha ikhadi lakho lesazisi, njenge